Apple inotangisa nzvimbo nyowani yakanangana nekushomeka kwemvura kweiyo iPhone 7 uye Apple Watch Series 2 | IPhone nhau
Apple inotangisa nzvimbo nyowani yakanangana nekushomeka kwemvura kweiyo iPhone 7 uye Apple Watch Series 2
El Kushambadzira kweApple kwaisazove kushoma nekuuya kweiyo nyowani iPhone 7 uye Apple Watch Series 2. Maviri madhizaini matsva eApple anounza maficha manyowani uye ayo Apple anoda kusimudzira.
Uye chii chiri nani pane simudzira izvo zvitsva zveApple zvishandiso Ko nedzimwe nzvimbo dzine kutaridzika kwemabhaisikopo? Mushure mekusvetuka tinokuratidza izvi zvitsva, uye zvisingaite, Apple mavara eiyo nyowani iPhone 7 uye Apple Watch Series 2. Uchaona pavanotanga kuona ruchiva rwavachakupa paterevhizheni ...
Uye chinhu chakanakisa ndechekuti Apple inotanga aya matsva mavara pane rhythm ye Kutinhira AC / DC. Nzvimbo, Mangwanani kukwira, iyo inotiratidza iyo isina mvura (kune splashes sekutaura kwevakomana paApple) yeiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus. Uye ndizvozvo, Ndeipi nzira iri nani yekuenda kunokwira bhasikoro ne iPhone yako? segwara richidonha tormenta zvakakwana. Zvakanaka, izvo, yakanaka bhasikoro kuchovha ...
Nzvimbo inotevera, Pakati pehusiku inotitaridza iyo nyowani iPhone 7 kamera. Hongu, Cherechedzo 7 iri nani, asi pakupedzisira iyo iPhone 7 ichave imwe yeanonyanya kushandiswa uye iyo inogona kuwana mimwe mitambo mairi, zvinogona kuita senge chirevo fanboy asi iyo data kubva kumasocial network inoratidza kuti iyo iPhone 7 ndicho chishandiso chinotorwa mamwe mafoto. Iyo kamera ichave ikozvino ichave iri inopesana nekupenya kwemvura uye iyo iyo mbiri lens inomira (imwe yacho ine zoom lens) yeiyo nyowani iPhone 7 Plus.
Ehe, iyo Apple Watch zvakare haina mvura
Uye iwe unogona kuzviona munzvimbo iyo Apple yakagadzira kusimudzira iyo nyowani vhezheni yayo smartwatch, iyo nyowani Apple Watch Series 2. A nyowani Apple Watch Series 2 iyo haina mvura, kusiyana nezvavanotaura nezve iyo iPhone 7, uye izvi ndizvo chaizvo izvo vakomana veCupertino vanonyanya kumira. Pindura mafoni uchigara padama remvura, kufambisa, kana kushambira neiyo nyowani nyowani yekurovedza yatinayo mune iyi nyowani vhezheni yeApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Apple inotangisa nzvimbo nyowani yakanangana nekushomeka kwemvura kweiyo iPhone 7 uye Apple Watch Series 2
Mhoro, kunyangwe kana isina chekuita neizvi, taura zvishoma nezve "muridzo" idzo dzimwe iPhone 7. Ipa maonero ako uye ruzivo nezvazvo kana uchikwanisa, kupfuura chero chinhu kusimbisa (kana kwete) varidzi vechigadzirwa. mubvunzo kana avo vanomirira mushure mekukumbira.
IOS 10 maficha haawanikwe pane iPhone 5 / 5c uye pakutanga